Namni haarawa Covid-19 qabame 2500 yoo tau namni 85 waliiglatti duani jiran. | KWIT
Namni haarawa Covid-19 qabame 2500 yoo tau namni 85 waliiglatti duani jiran.
By Fatiya Adam • Dec 4, 2020
Oromo News 12.04.2020
Oromo News 12/04/2020
Namni haarawa Covid-19 qabame 2500 yoo tau namni 85 waliiglatti duani jiran. Hanga ammaati Iowa keessati namni 2,603 kan duaniidha. Jiraattoni 1,000 hospitaala galanii jiru. Akka state guututi qorannoon bultii 14 godhame parsanti 16.6% dha.
Akka har’a gabaasameeti Woodbury County keessati sababa corona virus namni 4 akka due himan, namni haarawa qabame ammo 142 dha.
Manni fayyaa Siouxland akka jedhetti namni har’a due dubartii umrii 41 hanga 60 jidduu kan jirttuu yoo tau namni dhiira lama ammo umrii 61 hanga 80 jidduu kan jiruudha, fi nama umrii 81 dha. Woodbury County keessa namni hospitaala gale jiruu nama 88 dha. Akkasumas parsantiidhan yoo kaahame 18.75 dha.
South Dakota keessati namni 1,145 kan haarawa qabame yoo tau kanduemmoo 38 dha. Akka waliigalatti namni 83,348 kan qabame yoo tau 1,033 ammoo kan duaniidha. Namoota 538 kan hospitaala galaniidha.
Nebraska keessati akka waliigalatti namni qabame 1,371 yoo tau namni 42 ammoo kan duaniidha. Akka state guututi namni qabame 134,000 ol yoo tau 1,159 ammoo kan duaniidha. Namni hospitaala jiru ammo 845 dha.
Lakkoofsi namni mana hidhaa Nebraska keessati qabamu akkuma guddate jira. Hojattooni biro jahaa akka state guututi corona virus kan qabamaniidha, Deparmantin Nebraska Correctional Services akka jehdetti kamsaa galgala irrati oduu gan dhiifame. Sunis lakkoofs dabalataa hojattooni 3 dabataa guyyaa harbaa kan qabaman kan himameedha. Gabaasni dhumaa lakkoofsa kan namooti corona virus qabamanii erga dhukkubichi kun seene hojattoota mana hidhaa keessa jiranni 356 akka gahe muliisa. Hidhamtoota ammo kar 700 kan ta’an kan qabaman akka tae torbaan darbe keessa gabaasani jiran.
Governor Iowa Kim Reynolds state keessati nama Covid-19 tiin qabaman jalqabni talaali akka kennamu h
By Fatiya Adam • Dec 3, 2020
Oromo News 12/03/2020
Duuti sababa Covid-19 State Siouxland sadii keessati gudattaa Deemu jira.
By Fatiya Adam • Dec 2, 2020
Oromo News 12/02/2020
By Fatiya Adam • Dec 1, 2020
Oromo News 12/01/2020